Macluumaadka adiga oo ah kireyste — Bostads AB Mimer
Sidee ayaan u bixiyaa aniga warqadda lacag bixinta (qaan sheegashada)?
Sidee ayaan u bixiyaa warqadda lacag bixinta
Kirada bixi maalinta shaqo ee ugu danbeysa bisha. Haddii aanad wakhti ku bixin ayaad inkassokrav (codsi qoraal ah oo inaad deyn bixiso ah) ka sosocta Svea Inkasso heli doontaa taas oo ah shirkada inkassa-da ee aanu heshiiska la leenahay. Ma heli doontid wax xusuusin lacag bixinta ah ee waxaad heli doontaaa biilka ijaarka oo kaliya uun.
Haddii kirada aan wali la bixin saddex toddobaad kadib, ayaa kiiska loo dirayaa Kronofogden. Waxaad halis ugu jirtaain kontaraagaaga la buriyo/joojiyo oo aad gurigaaga weydid/ lumisid. Mimer waxay kontaraagaaga kireysiga la burin/joojin karaa haddii aad marar badan kirada la habsaanto.
Waxaa jira siyaabo kala duwan oo kirada lagu bixiyo:
Autogiro Markaas ayaa kirada si toos ah looga goosnayaa koontadaada. Waxa kaliya ee ay tahay inaad hubiso waa inay maalinta ugu dambeysa ee bisha lacagi ku jirto koontadaada, markaas oo kirada laga goosan doono koontadaada. Markaad autogiro wax ku bixiso ayaanad heli doonin warqadda qaansheegashada.
Bangiga internedka Hadii aad kirada ku bixiso iyadoo la soo maraayo Bangiga internedka, xasuusnow inaad sheegto lambarka bankgironummer 808-6142 iyo OCR- lambarka kaas oo ku dhigan warqada lacag bixinta. Haddii kale ma arki karno inay lacag bixintu adiga kaa timaad.
E-faktura markaas ayaad elektaroonig ahaan warqada kirada toos ugu helaysaa bangigaaga internedka. Waxaad dooran kartaa e-faktura haddii aad tahay qof gaar ah ooaad tahay qofka anaga naga haysta kontaraaga kireysiga. Waa inaad sidoo kale leedahay bangiga internedka.
Bangiga dhexdiisa Hadii aad ka bixiso boostada ama bangiga dhexdiisa, ayaad waxaad isticmaaleysaa warqada lacag bixinta ee la socotay warqaddaaada kirada. Haddii ay kaa luntey oo aad taas bedelkeeda aad gacanta ku qorto adiga warqaddaada lacag bixinta, waa inaad ku qorto magacaaga, cinwaankaaga iyo lambarka kontaraagaaga. Waa inaad sidoo kale ku qortaa in loo dirahu yahay Bostads AB Mimer oo aanad sheegto bankgironummer 808-6142.
Halkee ayaan ka eegaa warqaddaha lacag bixinta?
Markaad soo gasho Mina sidor (war bixintu waxay ku qoran tahay Af-Iswiidish) ayaad riixi kartaa ”Mina fakturor” (Aniga qaansheegashooyinkeyga) si aad ugu aragto dhamaan qaansheegashooyinkaaga. Halkan ayaad ka daabacan kartaa qaansheegashadaada adigoo riixaaya ”Detaljer”(Faahfaahin) si aad ugu aragto qaansheegashada wakhtigan taagan hoos u wad kadibna riix badhanka ”Skriv ut” (Daabac).
Xarunta macaamiisha ee Mimer kuuma daabici doonto wax waraaqo qaansheegashooyina ah, waxaad taas adiga ka sameyn kartaa Maktabada.
Kusoo dhawaw qolkaagii dhar maydhka!
Waatan waxoogaa tilmaamo ah oo qof kastaa uu u adeegsan karo qolka dhar maydhka.
Waxa aad kaliga maydhataa wakhtiga kuu balansan.
Waxa aad ka saartaa filterka qalajiyaha.
Waxa aad si wanaagsan u nadiifisaa mishiinka iyo meelaha saabuunta iyo jilciyaha.
Waxa aad nadiifisaa dhulka. Inta aad agabkiisa nadiifiso ku celi.
Waxa aad kala hagaajisaa oo aad ka daadisaa wixii kaa soo hashay ama waxa aad ku gurtaa qashinka.
Miyaa wax jaban yahay? La hadal 021-39 70 00 ama waxa aad kaga warbixisaa app-ka Mina sidor.
Samee dalabka booska gaariga la dhigto
Si aad ugu kiraysato meel gaariga la dhigto waa inaad kontaraag guri ka haysato Mimer. Waxaad dalabka booska gaariga ka sameynaysaa Mina sidor:
Soo gal Mina Sidor.
Hoos ugu dhaadhac cinwaanka ”Ledigt”(Firaaqo ah)
Geftinka Ansökningar (dalabyada) hoostiisa (ku yaala meesh aad ka arkeyso dhibcahaaga) ayaad riixeysaa Skapa ansökan p-plats (Samee dalabka booska baarkinka).
Ku buuxi macluumaadkaaga iyo rabitaankaaga ku saabsan booska baabuurta la dhigto.
Kadibna aad geftinka Sök ledigt. Buuxi P-platser (Booska Baarkinka).
Riix cinwaanka goobta baabuurta la dhigto ee aad rabto inaad rabitaankaaga ugu diiwaangeliso.
Riix badhanka Anmäl intresse (Diiwaangali rabitaankaaga).
Markaad haysato dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto oo kugu filan, ayaad heli doontaa in laguu soo bandhigo boosaska baarkinka ee banaan.
Waxaad rabitaankaaga u diiwaangelin kartaa ugu badnaan saddex meelood oo baabuurta la dhigto markiiba.
Haddii xaaladdaada noloshu ay isbedesho oo aanad ku sii jiri karin guriga, waxaad codsan kartaa beddelaad guri.
Shuruudahan ayaa la iskaga baahan yahay si aad ugu soo gudbiso codsi beddelaad:
Qofka aad guriga u badaleysaa waa inuu buuxiyaa shuruudahayaga aasaasiga ah oo aanu soona dayacin hoygii hore ee uu deganaa.
Bedelka waxa la ansixinayaa uun haddii kiraystaha cusubi uu doonaayo inuu guriga ku noolaado. Haddii aanay sidaas aheyn ayaad labadiinuba halis ugu jirtaan inaad lumisaan kontaraaga.
Codsiga guri Isku bedelaada lama ansixin doono ilaa la sameeyo kormeerka iyo soo eegista gurigaagii hore ka hor inta aanad heshiiska saxeexin.
Dalabkaaga caadiga ah waa la tirtiri doonaa marka aad u wareegto guri kale oo Mimer ay leedahay sidaas daraadeed ayaad lumineysaa dhibcaha aad hesho markaad safka guriga ee Mimer ku jirto. Dalab cusub ka samee Mina sidor.
Qofka heshiis guri la leh magaalada Västerås ayaan beddeli karin guri.
Haddii aad leedahay habsan kirada ah, ayaad kaliya ku bedeli kartaa aqal kaaga ka raqiisan uun.
Waakan foomka Ansökan om bostadsbyte (Dalabka beddelka guriga) (pdf) (af Iswiidish)
Senast uppdaterad: 11 maj 2020 kl. 12:41